Wershada wax-soo-saarka wax-soo-saarka rullaluleyda ee safka keliya ah - Shiinaha
Warshada Shiinaha sahayda Slewing ee booska alxanka
Xuzhou Wanda Slewing Bearing Co., Ltd.waa soo saaraha xirfadeed eewax lagu laayo, isku-dhafka naqshadeynta, wax-soo-saarka, iyo cilmi-baarista iyo horumarinta.
113 taxane ah oo wax lagu gowraco oo leh ilig gudaha ah oo loo isticmaalo mashiinnada saxda ah ee sare
Ma u baahan tahay wax-ku-soo-rogasho tayo sare leh?
Fadlan nala soo xiriir si aad u hesho qiimaha ugu fiican!
giraanta wax lagu gooyo rullaluistuyada iskutallaabta hal saf ah oo leh marsho dibadeed 111 taxane lulid
Faa'idooyinka hal saf-isku-tallaabta ah ee xadhkaha is-dhaafka ah waa:
Qaybinta xoogga qaabdhismeedku waa mid gaar ah, awoodda iska caabinta qaab-dhismeedkuna waa heer sare.
Meesha saxda ah ayaa ka xoog badan, qaladka la dhimayna waa ku dhawaad ​​eber.
Heerka tignoolajiyada iyo heerka wax soo saarka ee warshadda.
Faa'iidooyin taxane ah sida saxnaanta wareegga sare, iska caabinta xooggan ee qallafsanaanta, awoodda qaadista ballaaran iyo qaabeynta qaab dhismeedka dabacsan.
Nooca rullaluistemadka iskutallaabta ee hal saf ah oo loogu talagalay Tracker Solar-ka aan gear-ka lahayn 110.25.500
Hal saf oo iskutallaabta ah, oo ka kooban laba kursi, qaab-dhismeedka is haysta, miisaanka fudud, saxnaanta sare ee wax-soo-saarka, ururinta, farqiga yar ee loo baahan yahay saxnaanta rakibaadda waa sare, rullaluistemadka 1: 1 iskutallaabta loo habeeyey, wuxuu u adkeysan karaa xoogga axial iyo rogrogmida daqiiqada iyo xoogga weyn ee shucaaca, ayaa si weyn loogu isticmaalaa kor u qaadista gaadiidka, mishiinnada injineernimada iyo alaabta milatariga.
Giraanta wax lagu gooyo waxaa sidoo kale loo yaqaan 'rotary bearing', dadka qaar ayaa sidoo kale loogu yeeraa: taageerada rotary, taageerada cyclotron. Magacyada waa wax-ku-dhufashada, garaacista garaaca, garaacista leexinta iyo garaacista. mashiinka".Waa qayb muhiim ah oo gudbinta lagama maarmaanka u ah mishiinka u baahan in la sameeyo dhaqdhaqaaq wareeg ah oo wareeg ah oo u dhexeeya laba shay iyo xoog axial ah, xoog radial iyo daqiiqad foorarsi isku mid ah. Iyadoo horumarinta degdega ah ee warshadaha mishiinada, taageerada dilka ayaa si weyn loo isticmaalay Qalabka badda, mashiinada dhismaha, mishiinada warshadaha fudud, mishiinada biraha, mashiinada caafimaadka, mishiinada warshadaha iyo warshado kale.
XZWD kubbadda safka ah ee loo habeeyay giraanta wax lagu gowraco
Alaabooyinka waxaa si weyn loogu isticmaalaa mishiinada injineernimada, mishiinada dhismaha, macdanta iyo mishiinka macdanta, mashiinada maraakiibta, mashiinada ilaalinta deegaanka, mishiinka warshadaha iftiinka, mishiinka kiimikada batroolka, baabuurta injineernimada, qalabka warshadaha dagaalka iyo wixii la mid ah.Giraanta wax lagu gowraco waxa ay qaadi kartaa rarka dhidibbada, radial culayska iyo culayska daqiiqada foorarsiga isku mar.Waxaa lagu dari karaa pinion, meeraha gearbox iyo matoorada…
XZWD 011.60.2800 Gear Dibadeed Giraanta Kubbada Tooska ah ee Safka ah ee Wiishka
Kooxda Wanda waxaa ka go'an in ay ilaaliso ruuxa horumarinta joogtada ah oo ay diiradda saarto istaraatiijiyadeena heerarka xakamaynta tayada adag, jawaab celinta degdega ah, keenista degdega ah iyo qiimaha hooseeya. Waxaan rajeyneynaa inaan ka shaqeyno dhammaan baahida sii kordheysa ee macaamiisheena.Awoodeena si aan u wanaajino naqshadaynta baahiyahaaga gaarka ah waa mid aan la mid ahayn waxaanan ku caawin doonaa inta lagu jiro habka naqshadaynta, wax soo saarka iyo hirgelinta.
Dhexroorkayaga giraanta wax lagu dhufto ee wax-ku-dhufashada wuxuu noqon karaa 200 mm ilaa 5000 mm. Wadista wadista, waxaa jira sagaal (9) cabbir oo kala duwan oo laga heli karo 3 "ilaa 25" oo leh in ka badan 60 nooc.
XZWD kubbad hal saf ah oo wax ku dhufatay oo qaada wiishka munaaradda
Waxaan diirada saareynaa oo xakameyneynaa faahfaahin kasta oo wax soo saar ah, Kaliya gaarsiinta alaabada wanaagsan macaamiisha.
Walaxda wax lagu gowraco ayaa guud ahaan ah birta qaab dhismeedka alloy-sare leh, sida 42CrMo,50Mn.
Qalabka duuban waa GCr15 waxaana laga soo iibsadaa alaab-qeybiyeyaal gudaha ah oo leh tayada ugu sareysa.
Alaabada la heli karo oo ay ku jiraan: Kubbada Safka ah ee Keli ah iyo Laba-Laba, Roller-ka Saddexda Saf ah, Roller-ka Istalaabta ah ee La Shaabadeeyay iyo Ku Xidhan Gudaha Aan Shaabadnayn, Nadiifinta Dibadeed iyo Aan-Geared ahayn ama horay loo raray.
XZWD |Gear dibadda ah oo sax ah oo ka gudubtay rullaluistu wax qabad leh
Shabaqlaha hal saf ah ee la gooyey ayaa si weyn loogu isticmaalay codsiyo badan:
1. Qaadista gaadiidka
XZWD 4-dhibcood xagal xidhiidhka kubbada wax lagu laynayo
Giraanta wax lagu gowraco waxa ay qaadi kartaa rarka dhidibbada, radial culayska iyo culayska daqiiqada foorarsiga isku mar.Waxaa lagu dari karaa pinion, meeraha gearbox iyo matoorada…
Waxaan leenahay jadwal wax soo saar adag si aan u hubinno waqtiga gaarsiinta, jadwalka wax soo saarka sida hoose:
Qalabka OEM Roller Slewing Bearing ee loo habeeyay ee loo isticmaalo qaadista gaadiidka |XZWD
1. Ka kooban laba faraanti oo fadhiga
2. Qaab-dhismeedka is haysta iyo miisaanka fudud
3. Saxnaanta sare, nadiifinta yar
4. Waxa uu xambaari karaa xoog axial, daqiiqad natiijada iyo xoog shucaaca weyn
XZWD Roller Precision Slewing Bearing Gear Dibadda
Jihaynta rullaluistuyeedka iyo jidka orodka waxay ku taagan yihiin 45 digrii xagga dhidiga.
Awoodaha rarka taagan ee nashqadahan marka loo eego aagga taabashadu waxay ka sarreeyaan marka loo eego afarta iyo siddeedda dhibcood ee xidhiidhka, sidoo kale;
qallafsanaanta naqshadani waxay u oggolaaneysaa xawaare sare oo wareeg ah waxayna u oggolaan doontaa heer aad u weyn oo khalad ah oo ku dhejinta.
Si kastaba ha ahaatee, xaddidaadda riixitaanka shucaaca ayaa ka yar kuwa afarta iyo siddeedda dhibcood ee naqshadaynta xidhiidhka.